Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बजारमा नक्कली ब्राण्डका सामग्रीको बिगबिगी (भिडियोसहित) – Emountain TV
बजारमा नक्कली ब्राण्डका सामग्रीको बिगबिगी (भिडियोसहित)
काठमाडौं, ३० फागुन । पछिल्लो समय राजधानीमा बिदेशी ब्राण्डका नक्कली समाग्री उत्पादन गरेर उपभोक्ता ठग्ने क्रम बढ्दो छ । खाद्य सामग्रीसहित हरेक सामानमा नक्कली उत्पादन गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै गुण्स्तरमा झुटको खेति भएपछि अहिले प्रहरील सर्च अपरेसन चलाएर विभिन्न तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
मंगलवार प्रहरीले ललितपुरको ईमाडोलमा रहेको मिलन ड्राई कटिङ्ग प्रेसमा छापा मार्यो । जहाँवाट ‘मेड इन चाइना’ ‘मेड इन इण्डिया’को लेवल लगाएका बिएम्सी–मसला, एच्पी तथा क्यानन्–कम्प्युटर, ‘ग्रीनटि–सावुन लगायतका नक्कली प्याकेजिङका सामग्री बरामद गरिएको छ ।
इमाडोलको यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना भएपनि यो नयाँ घटना भने होइन । यस अघिपनि प्रहरीले बिएम्सी–मसला, हेड एण्ड सोल्जर–स्याम्पु, विभिन्न विदेशी ब्राण्डका गुट्खा बनाई बिक्री गरिरहेको गिरोह, नेपाली नोट छापिने गिरोहदेखि नक्कली सुनको कारोवार गर्ने गिरोहलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ ।
त्यसरी पक्राउ परेकाहरुलाई अबैध ओसारपसार तथा कालोबजारी ऐन अन्तर्गतका कसुरमा जिल्ला प्रशासनमार्फत मार्फत कारवाही चलाएको पनि छ । तर, कडा कानुनको अभावमा सजाय भन्दा अबैध कारोवारको लाभ बढि हुनेहुँदा यस्ता कार्य रोक्न कठिन भएको प्रहरीको बुझाई छ ।
यस्ता नक्कली प्याकेजिङका लागि बनाइएका खोलहरु बरामद भएपनि यस्ता सामग्री कहाँबाट उत्पादन भइरहेका छन् भन्ने पत्तालगाउन सरोकारवाला निकाय असफल भइरहेका छन् । बजारमा भेटिएका यस्ता सामग्रीमा मुख्य चिन्ता भनेको गुणस्तरको हो । तर, उपभेक्ताले उजुरी गरेका विएमसी मसलासहितका खाद्यय सामग्री गुणस्तरहीन नभेटिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण बिभागले जाएको छ ।
खाद्य प्रविधी तथा गुण नियन्त्रण बिभागले गुणस्तरहिन नभेटेको दवी गरेपनि यसरी गुपचुप उत्पादन भएर बजारमा जाने नक्कली बस्तुमा गुण्स्तर कायम हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिदैन । यसबाट के प्रमाणीत हुन्छ भने सरोकारवाला निकाय अनुगमनमा प्रभावकारी बनिरहेको छैन । उपभोक्ताहरु पनि ढुक्क भएर खाने वातावरण नभएको उपभोक्ताहरुको चिन्ता छ ।
नक्कली ब्राण्ड र अबैध कारोबार बढ्नु भनेको कानुन कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकाय कमजोर भएको अवस्था हो । उपभोक्ता हितको संरक्षण नहुनु भनेका नागरिकको स्वास्थ्य र देशको अर्थतन्त्रसँग मात्र नभए देशको भविश्यसमेत प्रभावित पार्ने गम्भीर विषय हो । तर, यस्तो संबेदनशील विषयमा समेत अनुगमन गर्ने तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रभावकारी नबन्नु विडम्बना हो । यसमा नागरिक सचेतना र सरोकारवाला निकायको प्रभावकारितालाई एकसाथ लैजान जरुरी छ ।